Toyota Caldina 2003 (#712731) ကို Pazundaung ၿမိဳ့နယ္တြင္... | CarsDB
Lot Number: #712731
Caldina ZTလေးရောင်းချင်ပါတယ် Eng. 2000cc colour. Silver Grade ZT Number YGN 4D/---- price. 168 သိန်း
TV , Air con , Air bag , Backcamera ,,,
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Tin Htut Aung မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Caldina 2003 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။